बाबालाई फोन गरेर भनिन्- ‘म मर्दैछु’, त्यसपछि ६ तला मा’थिबाट हा’म्फालिन् ! – Sudur Samaj
बाबालाई फोन गरेर भनिन्- ‘म मर्दैछु’, त्यसपछि ६ तला मा’थिबाट हा’म्फालिन् !
काठमाडौँ – एक मोडलले भवनको छैटौं तलाबाट हाम्फालेकी छिन् । उनले आ त्मह त्या गर्ने नियतले हाम्फालेको भए पनि उनको ज्यान भने जान पाएन । भारतको राजस्थान राज्यको जोधपुर सहरको रातानाडामा रहेको एक होटलबाट उनले हा म्फालेकी हुन् । मोडलको नाम गुनगुन उपाध्याय भएको बताइएको छ ।
उनी जोधपुरकै माताका थान निवासी गणेश उपाध्यायकी छोरी भएको बताइएको छ । उनी रातानाडास्थित होटल लर्डसमा बसेकी थिइन् । अहिले अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ । पुलिसले भारतीय मिडियालाई दिएको जानकारीअनुसार गुनगुन मोडलिङ गर्छिन् । उनी शनिबार उदयपुरबाट जोधपुर आएकी थिइन् ।
जोधपुर आएपछि उनले पितालाई फोन गरेर आफू आ त्मह त्या गर्न गइरहेको बताएकी थिइन् । उनले पितालाई आफ्नो अन्तिम अनुहार हेर्न भनेकी थिइन् । त्यसपछि पिता गणेशले तत्काल पुलिसमा सम्पर्क गरेका थिए । पिताको सूचनापछि एसीपी देरावर सिंहले फोन नम्बरका आधारमा गसनगुन भएको ठाउँ पत्ता लगाएका थिए । त्यसपछि पुलिस होटल पुगेको थियो तर पुलिसले उनलाई बचाउन नपाउँदै उनले छैटौं तलाबाट हा म्फालिन् । उनलाई तत्काल मथुरादास माथुर अस्पताल लगियो ।
अस्पतालका डाक्टरले उनको छाती र खुट्टाको हड्डी भाँचिएको बताएका छन् । अहिले पनि उनको स्थिति गम्भीर छ । उनले आ त्मह त्याको प्रयास किन गरिन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । उनी अहिले केही बताउने अवस्थामा छैनन् ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार गायक तिमिल्सैनाले पाए चुनाव चिन्ह आँप”
चुनावमा देशैभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुने !